Ivo Vanasikana veMachira Village, hafu yeiyo Anne Jacobs trilogy | Zvazvino Zvinyorwa
Vanasikana veguta remachira.
Vanasikana vemusha wemachira chikamu chechipiri cheunyanzvi trilogy chakagadzirwa nemunyori wechiGerman Anne Jacobs. Yakatanga kuburitswa mu2015, kunyangwe zvaisazove kusvika makore matatu gare gare iyo shanduro yeSpanish yaizosvika kuzvitoro zvemabhuku. Iwo mutambo wenhoroondo unotora pachena mhirizhonga pakati peCrawleys nevashandi vavo sosi yekukurudzira. Mhedzisiro? Kubudirira kukuru pakati peveruzhinji uye nevanoongorora.
Nzira yekuenda kune nyaya nezve yeEuropean aristocracy yekupera kwegumi nemapfumbamwe uye kutanga kwemakumi maviri emakore mazana akachinja zvakanyanya mushure megore ra2010. Gore iro rakaburitswa Downton Abbey, mumwe weakabudirira kwazvo terevhizheni yeBritish akambogadzirwa naOscar-anokunda screenwriter Julian Fellowes. Kubudirira kunoshamisa kweichi chigadzirwa kwakabvarura yekare paradigm: (zvinofungidzirwa) nhoroondo mitambo haitenge.
1 Nezve munyori, Anne Jacobs
1.1 Tarenda rakavanzika
2 Musha wemicheka, iro bhuku rakachinja zvese
3 Nhaka yemusha wemachira: chaiye kumberi uye shure
4 Kupokana kwevanasikana vemusha wemachira
5.1 Musanganiswa unobudirira
5.3 Nhoroondo seye kumashure
6 Nhoroondo yakagadzirisa
Nezve munyori, Anne Jacobs
Iye akazvarwa muna 1941, muLower Saxony, panguva iyoyo nyika huru yemubatanidzwa muGerman. Iye munyori anga achinyanya kuita godo nekuchengetedza hupenyu hwake hwepachivande, ndosaka ruzivo rwusina kuwanda. Iko hakuna kana chero chokwadi pamusoro paAnn Jacobs. Pakati pavo, zvidzidzo zvake mumimhanzi nemitauro. Zvakare, kwenguva yakareba akazvipira mukudzidzisa semudzidzisi wepachikoro chesekondari.
Basa rekunyora (asi kwete iro basa) rakasvika kwaari pazera rakakura. Mabasa ake ekutanga akaburitswa mukupera kwezana ramakore rechimakumi maviri, paakafunga kuzvipira zvizere kune tsamba. Iwo mamaki enhoroondo enhoroondo akamutendera kuti awane rusununguko rwemari kungoda chete kunyora. Kunyangwe iri kure nekuzivikanwa kweruzhinji, sezvo akashandisa mazita ekunyepedzera kuti agare mumumvuri.
Musha wemachira, iro bhuku rakachinja zvese
Muna 2014 akafunga kushambadza pasi pezita rake chairo. Aizozviita nechitsauko chekutanga chezvaanoziva mukubvunzurudzwa kwakasiyana siyana, aigara achigamuchirwa se trilogy. Musha wemachira yaitengesa zvakangwara. Zvakangodaro, zita iri rakapa Jacobs nzvimbo ine mukurumbira pakati pevanyori veGerman nhasi. Kuongorora kwevaverengi kwaifadza kwazvo, kunyangwe paine vamwe vatsoropodzi vaingozviona sebhuku "rakakodzera reprose".
Gore rakatevera, pakave nekutanga kwe Vanasikana veguta remachira, ane mukurumbira wakaita kuti Anne Jacobs ave munyori anowanzoitika pakati pevanhu veTeutonic. Nechezve ichi chinyorwa munyori akaratidza kugona kwake kuunza ngano pakati peyakaitika nhoroondo kurwa: Hondo Yenyika Yekutanga. Pamusoro pekugadzira yakakwenenzverwa nyaya yekwaya, iyo - kunze kwekutarisa zvese kune protagonist yayo - inochengetedza kukwana kuzere.
Nhaka yemusha wemachira: chaicho kumberi uye shure
Kuvharwa kweiyo trilogy kwakaburitswa (mune ese maGerman neSpanish) mu2019. Kunyangwe hazvo Jacobs aive awana budiriro huru kunze kwenyika nezvikamu zvakapfuura, kuzvitsaurira kwake "kwepamba" hakuna kusvika Nhaka yemusha wemachira. Nenzira, kubudirira mukutengesa kweizvi kwaireva kudiwa kukuru kwevatangiri vayo.
Vakagara vachiverenga nyaya yaMelzer vakafadzwa nemagumo. Kwavari, "kunonoka" yaive epiphany. Iyo nyowani uye inonakidza nyaya, yakapfuma mune zviwanikwa uye mafomula ayo akatove akaedzwa, asi achiri kushanda.
Kupokana kubva Vanasikana vemusha wemachira
Imba hombe yeAugsburg yakashandura chipatara chehondo inoshanda sedanho repamusoro. Fekitori yemachira inotora imwe "chiitiko". Pamwe pamwe nemadhirama akamutswa pakati pevatambi - anogara aripo makakatanwa nekugona mukati mehukama hwevanhu - zvaive zvisingadzivisike kuisa chinhu chikuru: Hondo Huru. Izvo zvakaitika mune mamiriro apo mukwikwidzi "Hondo Yenyika I" yanga isipo chaizvo, nekuti panguva yehondo iyi, hapana aifunga kuti paizove nemutowo.
Pakati pamazango enhoroondo fungidziro subgenre ndiko kusimbiswa kwehusimbe. Kune rimwe divi, chaicho "chaicho" uye "chisingabvunzwe" chokwadi, chekuti munhu wese anoziva mhedzisiro yacho (zvirinani zvishoma). Kune rimwe divi, vamwe vatambi vari nyore kukudziridza kunzwira tsitsi. Nekudaro, muverengi anowana mukadzi ane njodzi, akanaka uye akanaka kuita mushandi, nhamo yemhuri, chishuwo chekuvandudza ... uye makuru uye anonyadzisa zvakavanzika zvemhuri.
Iko kugona uye chimiro chakaratidzirwa naJacobs kusanganisa izvi zvese zvinhu, ndiwo musiyano maficha anoita kuti trilogy yake ive yakakosha. Izvi zvinhu zviri pachena kwazvo muchikamu chepakati, Vanasikana vemusha wemachira. Kune vanyori vazhinji, kupona zvikamu zvechipiri hazvisi nyore nguva dzose. Kunyange zvakadaro, Jacobs anopfuura nemaA.
Kwete chete iyo inosimudzira mweya wakagadziriswa neyekutanga chikamu, iye, zvakare, ichokwadi kune chimiro che trilogy, anoratidza kugona kunoshamisa kwe "kusviba denga" rehunhu hwake. Izvo zvakapusa chokwadi chekurarama inova titanic basa, nekuti iro rudo (gara rudo) rinogona kushanda seiri bharisamu uye chepfu.
Kazhinji, iyo trilogy yese ye Musha wemachira inowira mukati meyataizodaidza kuti "bhuku chairo." Chokwadi, kunyanya Vanasikana vemba yemachira. Nekudaro, kune imwe nhanho munyori anonzi anoshaya mavambo. Iri idambudziko? Mhinduro pfupi ndeye. Kunyangwe paine (pachena) kusavapo kwezvinhu zveinoveliki uye kushamisika, nyaya yacho haitaridze makomba.
Jacobs anoongorora mutsananguro dzevanhu vake uye, kunyanya, manzwiro avo. Nenzira iyi, munyori weSaxon haangogone chete kuchengetedza kufarira rangano, iye zvakare anowana kukura kweva protagonists. Panguva imwecheteyo, inoshandisa mazwi akachena, anoshamisa achitsetsenura (kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwe data nemazita), isina nzvimbo yekuvhiringidzika.
Nhoroondo seye kumashure
Ichokwadi kune rake rekudzidzisa, Iye munyori anotora mukana wenyaya yake kuita yakakosha nguva munhoroondo yeGerman inozivikanwa nechikamu chikuru cheveruzhinji. Chokwadi, haigone kutsanangurwa senhoroondo yehondo, zvisinei, Vanasikana vemusha wemachira inopa muongororwo wekuti nzanga yeGerman, vese vakuru nevasina kutsarukana mune zvemari vakararama kuburikidza negakava rakachinja nyika zvachose.
Jacobs anotenda zvakasimba munyaya dzekunyepedzera - Mune yake chaiyo nyaya, mune "nhoroondo yekunyepedzera" zvinyorwa - senzira inoshanda yekuparadzira zvimwe zvinhu kuruzhinji. Izvi zviitiko zvakaratidza chizvarwa uye zvakashandura nyika nekusingaperi. Zvakare, mushure mekuverenga iyo trilogy, vaverengi vanoshuvira kuwana mune zvakadzama zviitiko zvakaitika munguva iyi.
Quote naAnn Jacobs.
Vatsoropodzi vanogara vachiita basa rakakosha kana vachitaura nezve chero kuratidzwa kwehunyanzvi. Asi kana hunyanzvi nekutengeserana zvikaenda pamwe, sekune indasitiri yekutsikisa, chinhu chakanyanyokosha kuita kwevanhu. Nekudaro, mune zvakaitika kuna Anne Jacobs uye Vanasikana veguta remachira, mhinduro yacho inobatana: iri bhuku rinokosha kuverenga.
Ongororo dzakanaka dzinowedzerwazve nenhamba yemakopi akatengeswa: anopfuura mamirioni matatu emakopi pasi rese. Naizvozvo, kusava nechokwadi kupi nekupi kunojekeswa pamberi pechirevo chinotevera: iri bhuku rekubudirira mune yega pfungwa yeshoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vanasikana vemusha wemachira